mardi, 17 mai 2022 22:42
mardi, 17 mai 2022 22:39
mardi, 17 mai 2022 22:35
17 mai : Journée Mondiale contre l'hypertension.
Nosamborin’ny Zandary tany an-tranony, androany Talata 17 may 2022 maraina, Rtoa Vaonalaroy Randrianarisoa, Minisitry ny Kolotsaina sy ny Vakoka ary ny Asa Tanana tao amin’ny Governemanta Kolo Roger, ary efa Solombavambahoaka voafidy tao Brickaville.
Nividy fanaka mitentina 23 tapitrisa Ariary tamina orinasa iray izy. Nolavin’ny banky anefa ny seky nomeny ilay tranombarotra. Nametraka fitarainana teny amin’ny Zandary, Sampana heloka be Vava, eny Fiadianana, ilay tranombarotra ny 22 martsa 2022.
Androany ihany dia natolotra ny Fampanoavana ny raharaha.
Notoloran'ny fitondram-panjakana, amin'ny alalan'ny Ministeran'ny angovo sy akoran'afo jiro Cobra, miisa efapolo ny Faritra Androy.
Nandray izany ny alatsinainy 16 mey 2022 ny Goverinoran'ny Faritra, Dr SOJA Lahimaro, notronin'ny Prefen'Ambovombe ary natrehin'ny Ben'ny tanànan'Ambovombe ambonivohitra.
Hampiasaina eto an-tampotanana ireo jiro ireo, hanomezana endrika ny tanàna, indrindra fa hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo Fokontany somary mbola ahitana endrika fandrobana sy hala-botry.